ကာတွန်းစောငို – ခေတ်ပေါ် စစ်ချီသီချင်းသစ်၊ ကာရာအိုကီဗားရှင်း | MoeMaKa Burmese News & Media
ကာတွန်းစောငို – ခေတ်ပေါ် စစ်ချီသီချင်းသစ်၊ ကာရာအိုကီဗားရှင်း
2 Responses to ကာတွန်းစောငို – ခေတ်ပေါ် စစ်ချီသီချင်းသစ်၊ ကာရာအိုကီဗားရှင်း
အကီး on December 11, 2012 at 5:54 am
သမတကီး ဂွင် မကောင်းရင်၊ စုတင်း ဂွင်ပြောင်း
စုတင်း ဂွင်မကောင်းရင်၊ ဗီယက်နမ် ပင်လယ်ကိုတောင်း
တီရုတ်ကီး ကောင်းလား ? အီကို၊ ကောင်းလား ? အီကို
ကောင်းကောင်း ၊ မီကောင်းကောင်း
အောင်မင်း ရတုကီး မကောင်း
ZAW on December 11, 2012 at 10:02 pm
WRITE AND A++
DO NOT USE CHINESE PRODUCTIONS.
WINN THA NU MINE OF MYANMAY.
(wa state is in Myanmar not in china, pls remarkable NARAPATAET SIITHU MINN)